Khasaaraha weerarkii Kenya oo kordhay, dhimashada ayaa gaartay 21 qof – Radio Daljir
Janaayo 17, 2019 6:37 b 0
Ciidamada Ammaanka ee Kenya ayaa dilay shan xubnood oo gaystay weerarka lagu qaaday dhismaha hotelka Dusit2 , waxaana lasoo afjaray howlgalka oo qaatay toban saacadood inka badan, balse tirada dadka ku geeriyooday weerarka ayaa sii kordhaya, iyadoo dhimashadu ay gaartay 21 qof, waxanaa socda gurmadka loo fidinayo dadka dhaawacmay.
Hay’adda Laanqayrta Cas ee Kenya ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay suurtagal tahay inay sii kororto, waxaana ay sheegtay inay jiraan dad badan oo dhaawacyo halis ah qaba.
Al-Shabaab oo sheegatay masuuliyadda weerarka ayaa ku tilmaantay inuu jawaab uu u ahaa aqoonsiga Mareykanka ee magaalada Jerusalam u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israaiil, ciidamada Kenyana waxaa ay xireen laba qof oo looga shakisanyahay weerarka inay wax ka abaabuleen.
Dadka ku geeriyooday weerarka ayaa u kala dhashay 16 Kenyan ah, hal british ah iyo muwaadin u dhashay Mareykanka iyo sadex ruux oo Afrikaan ah, balse wali aan dhalashadooda si rasmi ah loo xaqiijin.
68 ka mid ah noocyada qafilan ee gaadiidka dagaalka oo loogu deeqay dowladda faderaalka (Sawiro)